Dhiragoni Bhora Xenoverse 2: zvikumbiro zveLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iwe uchatoziva nezve kuvhurwa kwemutambo wevhidhiyo Dragonball Xenoverse 2, iyi vhezheni nyowani yemutambo wengano wevhidhiyo unounza imwe yeakanakisa akanakisa akateedzana kudigital nyika yakaburitswa kune akati wandei mapuratifomu, pakati payo iyo Linux isingawanikwe. Kunyangwe iri nyaya yekumira kuti uone kana ichishanda pamwe neshanduro nyowani dzeWine uye PlayOnLinux, senge shanduro dzekare dzeiyo Dragon Ball vhidhiyo mutambo waita paLinux nekuda kwezvikamu izvi zvekuenderana kuisa nekumhanyisa Microsoft Windows software.
Iyo poindi ndeyekuti vateveri veiyi zita uye vamwe vazhinji havadi iyo chaiyo nharaunda kana inoenderana rukoko kuti vakwanise kutamba mutambo, asi ivo vanoda yemuno zita rechikwata che penguin chikuva. Neichi chikonzero, mumaforamu evakakurumbira Vavha, SteamVamwe vashandisi vava kutofamba vachibvunza uye vachikumbira Dragon Ball Xenoverse 2 kuti iiswe portal yekushandisa masisitimu akavakirwa paLinux kernel.
Iro zita idzva rinoratidzika kunge rakavandudzwa munzira dzese, nekuchinja kukuru kubva kuDhiraira Bhora Xenoverse. Asi sekutaura kwandaita, zvese hazvina kukwana kana zvisingakwanise kutambwa kubva kuGNU / Linux kune avo vedu vane desktop neiyi system. Saka, sekutaura kwangu, mirira kuti uone kana paine shanduko, dzinoita sedzakaoma, kana kuti mutambo unoshanda nemazvo neWine kana mamwe mapuratifomu akafanana kuti ugone kunakidzwa neyekutanga vhezheni yeWindows ...
Uye ini ndinopedzisa nekumuka-kwekufona uye nechikumbiro chandinofunga kupfuura mumwe wenyu achagovana, uye ndicho chinodikanwa cheDhiraira Bhora Xenoverse 2 uye mimwe mitambo yakawanda yepamusoro-soro kuti iuyewo kuLinux nyika yedu. Nenzira, kana iwe uchida kubvisa kuchiva neyemuno vhidhiyo mutambo weLinux ... kunyangwe kana isinganyanyo kufarirwa, ini ndinokurudzira Lemmingball z. A 3D vhidhiyo mutambo unobva paAkira Toriyama zvakasikwa izvo zvichaita kuti iwe uve nenguva yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Dhiragoni Bhora Xenoverse 2: zvikumbiro zveLinux
Eduardo inda populist akadaro
Uye sechipo tichaona legion yemapanchitos eiyo yahoo mhinduro dzegoku vs chero, kusimuka nemutambo mudiki….
Pindura kuna Eduardo inda populist
Linux Kernel 4.8.1 inosunungurwa